सबैभन्दा धेरै समय कैद सजाय पाउँनेले कति बर्ष पायो होला ? | PaniPhoto
सबैभन्दा धेरै समय कैद सजाय पाउँनेले कति बर्ष पायो होला ?	paniphoto / July 12, 2012 /3Comments हिजो मात्रै नेपालमा चेलीबेटी बेच्नेलाई १७० बर्षको कैद सजाय सुनाइयो । नेपाली कानुन बमोजिम बढीमा सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदमात्रै सजाय गर्न सकिने अवश्थामा एउटा अपराधीलाई औसत मानिसको आयुभन्दा बढी सजाय सुनाउँनु नेपालका लागि नौलो भयो । ‘राम ! राम ! यति लामो समय पनि सजाय हुन्छ ? बेकारको नाटक !’ टोलको चियापसलमा पसल्नी काकीको प्रतिक्रिया थियो । साँच्चै काकीले भने जस्तै नेपालमा दिएको यो सजाय नाटक कै लागि दिइएको हो त ? अरु देशमा लामो कैद सजाय गरेका कस्ता कस्ता उदाहरण होलान् ? एक पटक खोजी गरिहेरेँ । मैले नेपालमा दिएको भन्दा धेरै बर्ष थपका कैद सजायहरुको बारेमा थाहा पाएँ । ति अचम्म लाग्दा र निकै नै अनौठा छन् । यसैले यहाँ सेयर गर्दैछु । कृपया पुरा ब्लग पढ्नुभन्दा पहिले एक पटक अनुमान गर्नुहोस् । सबैभन्दा लामो समय कैद सजाय कति बर्षको दिइएको थियो ? अनुमान गरेपछि यस्को जानकारी हेर्नका लागि भित्र आउँनुहोस् ।
३ लाख ८४ हजार ९ सय १२ बर्षको जेल सजाय
सन् १९७२ मा स्पेनका एक हल्कारा(हुलाकी)लाई यति लामो समयको कैद सजाय सुनाइएको थियो । पाल्मा दे माल्लोर्का नामका २० बर्षिय हुलाकीले यो सजाय पाएका हुन् । उनले चार हजार चिठ्ठीहरु पुर्र्याउँनु पर्ने स्थानमा पुर्याएका थिएनन् । यसैले स्पेनी अदालतले उनलाई ३ लाख ८४ हजार ९ सय १२ बर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
दशहजार बर्षको कैद
यो सजायको फैसला अमेरिकामा दिइएको हो । सन् १९८१ मा डुड्ले वायने किजेरलाई उसकी श्रीमती र अन्य दुइजनालाई अत्यन्त क्रुरतापुर्वक मारेको भन्दै १० हजार बर्ष कैद गर्ने सजाय सुनाइएको थियो । अमेरिकी इतिहासमा यो नै सबैभन्दा लामो समय कैद सजाय तोकिएको फैसला हो ।
एकैजनालाई २८ वटा जन्मकैद, ९९ बर्षको कैद र १ मृत्युदण्ड
बबी जोए लङ, फ्लोरिडाका सिरियल हत्यारा हुन् । उनले पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडी ५० जनाभन्दा बढीलाई बलात्कार गरेका थिए भने २५ भन्दा बढीलाई बलात्कारपछी हत्या गरेका थिए । उनलाई उनको कर्तुतको फैसला गर्दै अदालतले उनलाई २८ जन्मकैद, ९९ बर्षको कैद र एक मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । बबी जोए लङको जिनमा नै खराबी भएका कारण उनी यति बिघ्न क्रुर भएको मानिन्छ ।
एकैजनालाई २५ जन्मकैद
क्यालिफोर्नियाका एक कृषकले उनको खेतीपातीमा सहयोग गर्ने २५ कामदारलाई एकबर्ष भित्र हत्या गरेका थिए । उनको कर्तुतले मानव प्रवृतिमाथि नै प्रश्न उभ्याएको भन्दै अदालतले उनलाई २५ जन्मकैद सुनाएको थियो । उनको नाम जुआन कोरोना थियो ।
७ हजार १ सय ९ बर्षको कैद
सन् १९६९ सालमा दुई इरानीहरुलाई प्रत्येकले ७ हजार १ सय ९ बर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो ।
सन्दर्भ स्रोत : इन्टरनेट
Tags: ?, कति, कैद, धेरै, पाउँनेले, पायो, बर्ष, भन्दा, सजाय, सबै, समय, होला / Posted in: सन्दर्भ बिशेष
विनिता खत्री says: July 13, 2012 at 8:06 pm / Reply
ओहो यस्तो पनि फैसला हुँदो रहेछ है
Ganesh man shrestha says: July 17, 2012 at 6:27 pm / Reply
वोह्ह्ह्ह!!!! सारै राम्रो खबर पो सुन्न पयियो त.
arjun says: December 7, 2012 at 11:09 pm / Reply
होइन यो सजाय छोरा नाति लाइ पुग्ने गरि दियो नि सुन्दात …सोर्ग पुगेर पनि फेरी आइपुगिन्छ